Masdar Institute of Science iyo Technology - Waxbarashada Bro
Masdar Institute of Science iyo Technology
Masdar Institute of Science iyo Technology Details
gaabinta : ceeryaamo
aasaasay : 2007
Ha iloobin in aad wada hadlaan Masdar Institute of Science iyo Technology
Qorto Masdar Institute of Science iyo Technology
Masdar Institute of Science iyo Technology waa jaamacadda ugu horeysay heer-graduate ee dunida ugu go'an tahay in bixinta xal-dunida dhabta ah si ay arrimaha waaridda. Ujeedada Institute waa in ay noqdaan jaamacadda cilmi-driven-heer caalami ah oo heer-graduate, diiradda on tamarta sare iyo teknoolajiyada waarta.
Waxay ku taallaa in City Masdar ee Abu Dhabi, caasimadda ah ee dalka Imaaraadka Carabta, Machadka Masdar looga golleeyahay in lagu taageero dhaqaale kala duduwan Abu Dhabi ee ababin aadanaha aadka loo xirfad iyo caasimada caqliga iyo shuraako la madaxda warshadaha. Tani waxay kaa caawin doonaa Imarada ee ay isbadal dhaqaalaha aqoonta ku salaysan iyo kor loogu qaado ay booska sida hoggaamiye ee tamarta caalamka.
Masdar City waa magaalo casri ah Carbeed in, sida khayrka ay, waa in habayn la agagaarkeeda. sida oo kale, waa model ah horumarinta magaalooyinka waarta gobol iyo mid caalami ah, doonaya in ay horumarka ka ganacsi-gal ah oo keena nool ugu sareeya tayada iyo duruufta shaqo la raad ugu hooseeya ee suuragalka dhawrista. The campus Institute Masdar waa muuqashadii ah hadafyada kuwa, ku shaqeeya by tamarta la cusboonaysiin karo iyo ay taageerayaan ku laayeen goynta of technology, siinta ardayda fursad gaar ah in ay ku noolaadaan oo ay bartaan in run ah "shaybaarka nool" deegaanka.
xarunteeda gudahood, Machadka Masdar waxaa la dhiso deegaan waxbarasho oo, dhaqan of R&D heer sare, oo xiriir la leeyihiin dowladda iyo warshadaha laga maarmaanka u ah kobcinta hal-abuurka wadaniga ah, caasimada aadanaha iyo horumarinta aqoonta, iyo ruux ee ganacsiga iyo tartan caalami ah.
caasimada Aqoonta waa wax soo saarka ah ee waayo-aragnimo, macluumaad, aqoonta, waxbarashada iyo xirfadaha ah oo ay shakhsiyaad iyo kooxo. Waxay bixisaa aasaas u faa'iidada tartanka muddo-dheer, iyo horumarinta waa muhiim in aragtida istraatijiyadda hoggaanka Abu Dhabi ee suuqyada caalamiga ah ee mustaqbalka. Machadka Masdar waa ciidan wadista ka dambeeya abuurista caasimada aqoonta ee Abu Dhabi.
Awoodda Institute ee ay tan u sameeyaan waa adag ku tiirsan dhaqanka jaamacad in ku nuuxnuuxsaday, cilmi-baarista iyo horumarka heer sare ah, abuurnimo technology, iyo ganacsiga. Dhiirigelinta dhaqanka this waxaa diiradda of our iskaashiga cross-anshax iyo xoogga on labada cilmi aasaasiga ah iyo codsatay. By kabaallaynta faa'iidooyinka istiraatiiji ah oo ay kala, Machadka Masdar siisaa ardayda cilmiga iyo nidaamyada eego dhinaca farsamada muhiim u ah hal-abuurka iyo hoggaanka fikirka.
Machadka, taas oo la abuuray oo kaashanaysa machadka Massachusetts ee Technology (WITH), midaynaysa aragtida iyo dhaqanka si incubate dhaqanka ah hal-abuurka iyo ganacsiga, ka shaqeeya si ay u horumariyaan u lahaa mufakiriintii xaaladaha halista ah iyo hoggaamiyeyaasha berri.
Kaliya ugu ifka UAE qalin qaranka iyo kuwa caalamiga ah, kuwaas oo ay muujiyaan awoodaha gaarka ah caqliga iyo ganacsi oo waa ka go'an in ay wax ka qabtaan baahida adduunka ee tamarta, Waxaa laga yaabaa in ku biiro Institute Masdar. Iyada oo ay awood heer caalami iyo ardayda heerka sare-, Machadka waxaa ka go'an in ay xal u ah caqabadaha tamarta nadiif ah iyo isbedelka cimilada helo.
Machadka Masdar ayaa sidoo kale doonaya in uu ku noqon karo ciyaaryahanka tamarta iyo technology nadiif ah la cusboonaysiin karo ka keentay, by bixinta sariirta imtixaan dunida si ay u horumariyaan xal tamar iyo ganacsi-gal waarta, fududeynta codsatay cilmi afarta hubka shirkadaha ee ay xulufada kooxda Masdar iyo UAE oo dhan.
Sababaha ay u dooran Masdar Institute of Science iyo Technology:
cilmi-Jarida-ku laayeen diiradda on tamarta sare iyo technology waarta
iskaashi joogto ah Close la MIT
barnaamijyada ka qalin tayo-sare ee ku salaysan baahiyahaaga warshadaha ee UAE iyo dunida oo dhan
campus Sustainable gobolka-of-theart goobaha iyo qalabka
Iskaashi xoogan la leh warshadaha iyo jaamacadaha gobolka iyo caalamka
deeq Full ay ka mid yihiin la isiiyo tartan
awood International PhD-ka jaamacadood ee ugu sareeya dunida ee
Jawi dhaqmo badan ardayda ka badan 60 dalalka
Engineering Systems iyo Maareynta
Biyaha iyo Engineering Environmental
Kombuyuutarada & Science Information
Engineering Power korontada
Machadka Masdar waxaa la aasaasay on February 25, 2007. Sida of September 2013, Machadka shaqeeya 81 xubnaha macalimiinta iyo lahaa diiwaan gelinta ee 417 ardayda. Dhismaha Machadka Masdar waa qayb ka mid ah siyaasadda khayraadka kala duwan ah imaarada Abu Dhabi. hoggaanka Abu Dhabi ee u arka cilmi-baarista iyo waxbarashada ee tamarta kale sida dhagaxa rukunka u ah horumarinta mustaqbalka ee imarada iyo ku muujiyey sida ay uga go'an tahay iyadoo la Masdar Initiative, Masdar City iyo Zayed Future Energy Prize.
Madaxweynaha, Fred Moavenzadeh, ayaa loo magacaabay in June 2010 oo waa James Mason farshaxan Professor ee Systems Engineering iyo Deegaanka iyo Civil Engineering ee MIT.
Ma rabtaa wada hadlaan Masdar Institute of Science iyo Technology ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Masdar Institute of Science iyo Technology on Map
Photos: Masdar Institute of Science iyo Technology rasmiga ah Facebook
Masdar Institute of dib u eegista Sayniska iyo Technology
Ku biir si ay ugala hadlaan of Masdar Institute of Science iyo Technology.